.: ကျွန်တော်နှင့် တက္ကသီလာ မှ အက္ခရာများ (၄)
+ဆရာ့ စာအုပ်တစ်အုပ်ထဲက .. ခေါင်းလောင်းဆွဲထားပေးတဲ့ခွေးကို အမှိုက်ထုပ်တပ်ပေးသလို လွတ်လပ်စွာတွေးခေါ်ပြီးလုပ်ဆောင်ခြင်းဟာ လွတ်လပ်စွာ ရှင်သန်ခြင်း တစ်ခုလို့ ထင်ပါတယ်။
-ဟုတ်တာပေါ့။ ခင်ဗျားလည်း ကျွန်တော့်လို လူမျိုး ဆိုရင် တစ်နေ့ကြီးပွားဦးမယ် … ။
ဝတ္ထုတိုရေးဖွဲ့ရာတွင် မည်သည့်အချက်များ လိုအပ်သနည်း (သို့မဟုတ်) မည်ကဲ့သို့ ရေးဖွဲ့ရသနည်း။
-ကမ္ဘာကျော်စာရေးဆရာကြီးတစ်ယောက်ကပြောဖူးပါတယ်။ ၀တ္ထုတိုရေးဖွဲ့ရာမှာ အဓိက အရေးကြီးတဲ့ အချက်ကြီးသုံးချက်ရှိတယ်တဲ့ … ဒါပေမယ့် ခက်တာက အဲဒီအချက်ကြီး သုံးချက်ကို ဘယ်သူမှမသိကြဘူးတဲ့ …
+ဆရာတာရာမင်းဝေခင်ဗျာ . .
ဆရာလူထုစိန်ဝင်းရဲ့ “ လက်ဖက်ရည် ခွက်ထဲမှ မုန်တိုင်းများ ” စာအုပ်ကို ဘယ်လိုထင်ပါသလဲ။
-ကျွန်တော်နဲ့ အမြင်မတူပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အဲဒီစာအုပ်ကို လေးလေးစားစား ဖတ်ပါတယ်။ကမ္ဘာကျော်စကားတစ်ခွန်းကို ပဲ ကိုးကားပြီး ပြန်ပြောလိုက်ပါ့မယ်။
ကျွန်တော့် အသက်နဲ့ လဲပြီး ကာကွယ်ပေးပါ့မယ်။”
လူဆိုတာ အခက်အခဲတွေကို ကြုံတွေ့ရတာဓမ္မတာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် . . . အဲဒီအခက်အခဲ တွေကြားမှာ ဝမ်းသာမှုတွေ တစ်ခါတလေ တွေ့ တတ်ပါတယ်။ အဲဒီဝမ်းသာမှုတွေထဲမှာ ဘာဝမ်းသာဝမ်းမြောက်မှုတွေက အကောင်းဆုံးလဲလို့
-လူအမျိုးမျိုး ၊ ဘဝ အထွေထွေ ရှိကြလေတော့ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် တူနိုင်မယ်မထင်ပါဘူး။ ဝမ်းမြောက်မှုအပေါ်မှာ နားလည်ခံယူကြပုံချင်းလည်း ကွဲလွဲနိုင်ပါတယ်။
“ ပြိုင်မြင်းတို့ရဲ့ ခွာသံ” အတွက်ဆရာ့ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဆရာ့အတွက်ဂုဏ်ယူပါတယ်။ ဆရာ့ရဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ လေ့လာမှုအတွေ့အကြုံအကြောင်းဟောပြောပေးပါ။
-အင်္ဂလိပ်စာ လေ့လာနည်းတွေကတော့ အများကြီးရှိပါတယ် . . . ။
လူသိနည်းပြီး ထိရောက်မယ့် “နည်း” တစ်ခု ပြောပြပါ့မယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို …. အင်္ဂလိပ်လူမျိုးတွေကြားထဲမှာ ရောက်နေတယ်လို့ လုပ်ကြည့်ပါ။ တရားထိုင်သလို ထိုင်ရမှာပါ။ မိနစ်၂၀ လောက် စမ်းလုပ်ကြည့်ပါ။ အချိန်ပေးနိုင်ရင် ပေးနိုင်သလောက် လုပ်ယူပါ။ စိတ်ကူးထဲက အင်္ဂလိပ်လူမျိုးတွေနဲ့ ရဲရဲတင်းတင်း ရေးဖတ်ပြောဆိုဆက်ဆံနေပါ။ အချိန်တိုတို အတွင်းမှာ တိုးတက်လာတာကို ကြုံဆုံရပါလိမ့်မယ်။ နောက်ဆုံး အိပ်မက် မက်ရင်တောင် အင်္ဂလိပ်လို မက်လာပါလိမ့်မယ်။
ထော်လော်ကန့်လန့် လုပ်တာ တစ်သက်လုံး ဒီအတိုင်းပဲဖြစ်သွားသလား။ ဒါမှမဟုတ် ဘယ်အချိန်မှာတည့်သွားပါသလဲ။
-အနုတ်နဲ့ အနုတ် မြှောက်ရင် အပေါင်းဖြစ်တယ်မဟုတ်လား။ တစ်ခါတခါ တော့ တည့်သွား တတ်ပါတယ်။
ဆရာ့ဇာတ်ကောင် ဂျိုကာနဲ့ ဆရာ ဘယ်သူ ပိုတော်ပါသလဲ။
စာပေလောကထဲကို ဝင်ရောက်ဖို့စွန့်စားတဲ့လူတစ်ယောက် (သုညကစွန့်ဝင်တဲ့လူတစ်ယောက်)ကို
-ကျွန်တော့်ရဲ့ ကဗျာစာသားတစ်ပုဒ်အတိုင်းပါပဲ။ “ လောကမှာလေပြေ ကိုချည်း မျှော်လင့် စရာမလိုဘူး ၊ မုန်တိုင်းမှာလည်းအောက်စီဂျင်ပါ ပါတယ်” ရှင်သန် ခွင့်အပြည့်ရှိပါတယ်။
ဆက်စပ်တွေးခေါ်မှုသည် နေရာတိုင်းတွင် အသုံးဝင်ပါသလား ။ ထော်လော်ကန့်လန့်ဖြေပေးပါရန် ပန်ကြားပါသည်။
-ချစ်စရာကောင်းတာတွေ ကြုံခဲ့ရဖူးပါတယ်။ တာရာမင်းခြောက်ဆယ်လို့ ခင်ဗျား ကျွန်တော့် ကို သုံးနှုန်းတာက သိပ် အလင်္ကာမမြောက်ပါဘူး။ တစ်ခြားပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ကဆိုရင် ကြယ်မင်းဆေးပေါ့လိပ်အလိပ်ခြောက်ဆယ် ကျွန်တော့်ကို ပေးပို့ဖူးပါတယ်။ သူ့နာမည်ကလည်း “ဥက္ကာဝေ” လို့ လက်မှတ်ရေးထိုးထားပါတယ်။ သူ့ကိုကျွန်တော် ဥက္ကာ ( ၆၀) ပြန်မပို့နိုင်ပါ။ သူ့အိမ်က အုတ်ခဲတွေကြားမှာ ဘိလပ်မြေ လိုနေရင် နည်းနည်း ဖြည့်ပေးမယ်လို့ ကျွန်တော်ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။ ဒီထက်ပိုပြီး ကျွန်တော်ဘာမှမတတ်နိုင်ပါ။ အမှန်တော့ ပရိသတ်ဆိုတာ စာရေးဆရာထက် ပိုတော်ပါတယ်။
+Post Modern ဖြစ်မဖြစ်ကို ဖန်တီးသူက ရည်ရွယ်ထားခွင့်ရှိပါသလားခင်ဗျား။
-ရည်ရွယ်စရာမလိုပါဘူး။ ဖြစ်တဲ့သူက သူဟာသူဖြစ်ပါတယ်။
+ကျောက်သင်ပုန်းပေါ်က သုညနဲ့ ဗလာစာရွက်ပေါ်က သုညဘာကွာပါသလဲ။ ကျွန်တော်ကတော့ ကျောက်သင်ပုန်းပေါ်ကို မြေဖြူနဲ့ရေးပြီး ဗလာစာရွက်ပေါ်ကို ခဲဖျက်ပါတဲ့ ခဲတံနဲ့ရေးထားလိုက်ပါတယ်။
ကျောက်သင်ပုန်းပေါ်က သုညအတွက်လည်း ဘောဖျက်ရှိပါတယ်။
+မော်ဒန်အနုပညာ ပို့စ်မော်ဒန်အနုပညာ များနဲ့ ကျွန်တော်တို့ကို မိတ်ဆက်ပေးပါဆရာ။ (နားမလည်ရင် မော်ဒန်ဖြစ်တယ်လို့ ခပ်ကြမ်းကြမ်း ပြောနေကြပါတယ်။)
၁။မော်ဒန်၊ပို့စ်မော်ဒန် အနုပညာကိုမိတ်ဆက်ပေးဖို့ဆိုတာ ကတော့ အတော့်ကို ကျယ်ပြန့်နေပါတယ်။ ဒီနေရာကနေ အကျယ်ပြောလို့မရနိုင်တာကို ခွင့်လွှတ်ပါ။
၂။ပန်းသီးတစ်လုံးကို ခင်ဗျားစားလိုက်တယ်ဆိုပါစို့။ ချိုရင်ချိုမယ်၊ ချဉ်ရင်ချဉ်မယ်၊ အဲဒီအပေါ်မှာခင်ဗျားခံစားဖို့ လိုတယ်။ နားလည်ဖို့မလိုဘူး။ နားမလည်ဘဲခံစားရတဲ့ အရာတွေ လောကမှာ ရှိပါတယ်။ ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်း ပြောတယ်ဆိုတာကတော့ ဝေဖန်ရေးဆရာတွေရဲ့ စကားပြိုင်ဆိုင်မှုတွေအပေါ်မှာဖွဲ့တည်သွားတာ လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
မော်ဒန်ဝတ္ထု၊ကဗျာကိုဖန်တီးသူ တစ်ယောက်ဟာ ဘာတွေလိုအပ်ပါသလဲ။ ဘာတွေသိထားသင့်ပါသလဲ။ ဘာအကြောင်းကိုဘယ်လို ခံစားပြီး၊ ဘယ်လိုစ၊ ဘယ်လိုဆုံး ဆိုတာကို ဘယ်လိုသတ်မှတ်ပါသလဲဆရာ။
-ဒဿနဆိုင်ရာမေးခွန်းတစ်ခုရှိပါတယ်။ “ရေကိုဘယ်သူစတွေ့သလဲ၊ငါးတော့ မဟုတ်ဘူး” တဲ့။ ရေထဲမှာနေတဲ့ ငါးက ရေအကြောင်းကိုမသိဘူး ဆိုတာသဘာဝကျပါတယ်။ သူကလည်း လောကတစ်ခုအနေနဲ့ကျင်လည်တာကိုး၊ အဲဒီငါးနဲ့ရေလိုပါပဲ… ကျွန်တော်တို့ လောကသားတွေကလည်း လောက ကိုစတင်သိမြင်သူတွေဟုတ်ရဲ့လား၊ လောကထဲမှာ ရှင်သန်နေပေမယ့် လောကအကြောင်းရော တကယ်သိကြရဲ့လား။ အဲဒီလိုဒဿနမျိုးကို အခြေခံပြီး မော်ဒန်အနုပညာပေါ်ပေါက်လာပါတယ်။ Law of uncertainly လို့ ခေါ်တဲ့ မရေရာမှုတွေ ၊ နားလည်ရခက်မှုတွေနဲ့ အဆုံးအစမဲ့တဲ့နေရာတစ်ခုမှာ ကိုယ်က အစက်အပြောက်တစ်ခု အနေနဲ့ ဖြတ်ပိုင်းလက်မှတ်မရှိဘဲ ရှင်သန်နေရမှု . . . အဲဒါတွေ ပေါ် အခြေခံပြီး မော်ဒန်အနုပညာပေါ်ပေါက်လာပါတယ်။
မြန်မာလို စာအုပ်စာတမ်းတွေ ရှိပါတယ်။ ဖတ်ကြည့်စေလိုပါတယ်။ အဲဒါထက်ပိုပြီး မော်ဒန်အနုပညာတွေကို စိမ့်ဝင်ခံစားကြည့်စေလိုပါတယ်။ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် အလိုလိုသိလာမှာပါ။ ဒါဟာ တကယ့်စေတနာတွေနဲ့ ပြောပြတဲ့ အကြံပေးစကားပါ။
မှတ်ချက်။ ။ အင်တာဗျူးဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြခဲ့ဖူးသည့် ဆရာတာရာမင်းဝေ၏ အထက်ပါ အင်တာဗျူးကို အီးမေးလ်မှတဆင့် ပေးပို့လာသူ ကိုနေမိုးဝေအား ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။
ကျွန်တော်နှင့် တက္ကသီလာ မှ အက္ခရာများ (၃)
ကျွန်တော်နှင့် တက္ကသီလာ မှ အက္ခရာများ (၂)
ကျွန်တော်နှင့် တက္ကသီလာ မှ အက္ခရာများ (၁)